वर्डप्रेस रखरखाव चेकलिस्ट: टिप्स, उपकरण, र उत्तम अभ्यासहरूको अन्तिम सूची | Martech Zone
शुक्रबार, जुलाई 20, 2018 शनिबार, अक्टोबर 24, 2020 Douglas Karr
आज मात्र म हाम्रा दुई ग्राहकहरुसँग उनीहरूको WordPress स्थापनाहरूको बारेमा भेट्दै थिएँ। म सामग्री ब्यवस्थापन प्रणालीको बारेमा धेरै विक्रेता-अज्ञेष्टिक हुँ। WordPress को समग्र लोकप्रियताले वास्तवमै यसलाई मद्दत गरेको छ किनकि सबै भन्दा तेस्रो पक्षहरू यससँग एकीकृत हुनेछन्, र विषयवस्तुहरू र प्लगइन इकोसिस्टम तपाईंले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ त्यति नै राम्रो छ। मैले धेरै केहि विकास गरेको छु वर्डप्रेस प्लगइनहरूम आफैंको ग्राहकहरु लाई सहयोग पुर्‍याउन र इकोसिस्टमलाई सहयोग पुर्‍याउँछु।
त्यो भने, यो यसको मुद्दा बिना छैन, यद्यपि। किनभने यो त्यस्तो लोकप्रिय छ सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली, जहाँसुकै ठाउँमा ह्याकरहरू र स्प्यामरहरूको प्राथमिक लक्ष्य वर्डप्रेस। र यसको प्रयोगको सजिलोताको कारण, फूलेटेड स्थापना निर्माण गर्न यो एकदम सजिलो छ जसले साइटहरूलाई रोक्नको लागि रोक्छ। आजकल प्रदर्शन यति महत्वपूर्ण छ प्रयोगयोग र खोजी अनुकूलन गर्न को लागी, यो धेरै साइटहरु को लागी राम्रो कोड छैन।
त्योले भन्यो, यो महान छ कि त्यहाँ बग्रोककपोन जस्ता मान्छेहरू छन् जसले वर्डप्रेस प्रशासकहरूलाई मद्दत गर्न व्यापक इन्फोग्राफिक्सहरू विकास गरेका छन्। तिनीहरूको इन्फोग्राफिक, WordPress वेबसाइट रखरखाव चेकलिस्ट, सँग वेबसाइट मालिकहरूको लागि उनीहरूको कार्यप्रवाहमा अनुसूची गर्न 50० भन्दा बढी आवश्यक सुझावहरू र अभ्यासहरू छन् मुद्दाहरूलाई रोक्नको लागि।
यहाँ मेरो वर्डप्रेस रखरखाव सूची छ
इन्फोग्राफिकसँग केहि बढि वस्तुहरू छन्, तर यदि तपाईंले यसलाई कभर गर्नुभयो भने तपाईं आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरू भन्दा अघि हुनुहुन्छ! म पनि एक सूची राख्छु उत्तम वर्डप्रेस प्लगइनहरू हामीले परीक्षण र कार्यान्वयन गरेका छौं ... यसलाई बुकमार्क गर्न नबिर्सनुहोस्!
तपाईंको WordPress डाटाबेस बैकअप गर्नुहोस् - तपाइँ WordPress को साथ केहि गर्नुभन्दा पहिले, तपाइँसंग अफ्साइट राखिएको महान ब्याकअप छ भनेर निश्चित गर्नुहोस्। यसैले हामी वर्डप्रेस प्रबन्धित होस्टिंगको साथ प्रयोग गर्दछौं Flywheel। तिनीहरूसँग एक क्लिक पुनर्स्थापनाको साथ स्वचालित र म्यानुअल जगेडा छ। हामीले कहिले पनि कुनै पनि कन्फिगर वा सक्षम गर्नुपर्दैन ... तिनीहरू सँधै आएका थिए!
WordPress लाई एक चेकअप दिनुहोस् - को माध्यम बाट आफ्नो साइट चलाउनुहोस् WP चेकअप र तपाइँ तपाइँको साइट को साथ सफा गर्न को लागी एक टन चीज भेट्टाउनुहुनेछ। प्रत्येक मुद्दाले तपाईंलाई गम्भीर रूपमा प्रभाव पार्ने छैन - तर प्रत्येक सानो अनुकूलन गणनाहरू!
वेबसाइट गति अडिट - प्रयोग गर्नुहोस् गुगलको पेजस्पेड इनसाइट्स गति मुद्दाहरूको लागि पृष्ठहरू विश्लेषण गर्न।
टूटेका लिंकहरूका लागि जाँच गर्नुहोस् - धेरै अनलाइन उपकरणहरू प्रयोग गरिसकेपछि, मैले यस भन्दा राम्रो कहिल्यै देखेको छैन भ्यागुता एसईओ स्पाइडर चिच्याउँदै भाँचिएका लिंकहरूका लागि साइटहरू क्रलिंगका लागि। इन्फोग्राफिकले यो गर्नको लागि प्लगइन थप्न सिफारिस गर्दछ, तर त्यसले तपाईंको प्रदर्शन डिग्रेड गर्न सक्छ र तपाईंलाई तपाईंको होस्टको साथ समस्यामा थोडा पार्दछ।
301 टूटेका लिंकहरूका लागि पुनःनिर्देशन - हाम्रो ग्राहकहरूको बाहिर होस्ट गरिएको WPEngine, जसको आफ्नै पुनःनिर्देशन प्रशासन रहेको छ, हाम्रा सबै ग्राहकहरू चलाउँछन् पुनर्निर्देशन प्लगइन.
पछिल्लो संस्करणमा WordPress, थिमहरू र प्लगइनहरू अपग्रेड गर्नुहोस् - आजकल सुरक्षा मुद्दाहरूमा यो आवश्यक छ। यदि तपाईं त्यस्ता व्यक्तिहरू मध्ये हुनुहुन्छ जुन एक प्लगइन अपग्रेड गर्न चिन्तित छन् तपाईंको साइट भंग गर्न सक्दछ भने, तपाईं नयाँ प्लगइन खोज्न सक्नुहुन्छ। सबै विकासकर्ताहरूसँग आउँदो WordPress रिलीजहरूमा उनीहरूका थिमहरू र प्लगइनहरू परीक्षण गर्ने अवसर छ।
स्पाम टिप्पणीहरू मेटाउनुहोस् - म अत्यधिक प्राप्त गर्न सिफारिश गर्दछु jetpack र यसको साथ सहयोग गर्न Akismet को सदस्यता।
प्रयोग नगरिएका थिमहरू, छविहरू, र सक्रिय, प्रयोग नगरिएका प्लगइनहरू मेटाउनुहोस्। सक्रिय गरिएको प्लगइनहरूले तपाईंको साइटमा प्रकाशन गर्दा थप कोड थप गर्दछ। त्यो ओभरहेडले तपाइँको साइटलाई वास्तवमा ढिला बनाउन सक्दछ त्यसैले तपाइँको उत्तम तरिका बिना नै गर्नु हो।
संस्करण र रद्दी टोकरी खाली गर्नुहोस् - तपाईंको डाटाबेस जति सानो छ, सामग्री तान्न द्रुत प्रश्नहरू। पृष्ठ र पोस्ट संस्करण सफा गर्न निश्चित गर्नुहोस् साथै मेटाइएको पृष्ठ र पोष्टहरू नियमित रूपमा।
वेबसाइट सुरक्षा निगरानी - Flywheel हामी सुरक्षा प्लगइनका ठूलो फ्यानहरू होइनौं, म यसको सट्टामा उत्कृष्ट होस्टको साथ जान सिफारिस गर्दछु। तिनीहरूको टोली सुरक्षाको शीर्षमा रहन्छ प्लगइनको प्रदर्शन ओभरहेड बिना।
डाटाबेस तालिकाहरू अनुकूलन गर्नुहोस् - यदि तपाईंले केहि थिमहरू र प्लगइनहरू स्थापना गर्नुभयो भने, तिनीहरू मध्ये धेरैले डाटाबेसमा डाटा छोड्छन्। यसले कार्यसम्पादन मुद्दाहरूमा थप्न र लोड समय बढाउन सक्दछ किनकि प्रयोग नभएको डाटा अझै पer्क्ति र लोड हुन सक्छ जुन यो दृश्यमान छ वा छैन। सूचीबद्ध प्लगइन एकदम पुरानो हो, मँ सिफारिस गर्दछु उन्नत डाटाबेस क्लीनर.
छवि अनुकूलन - असम्पीडित छविहरूले तपाईंको साइटको प्रदर्शनमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ। हामीलाई मन पर्छ क्राकेन र हाम्रो छविहरू कम्प्रेस गर्न यसको वर्डप्रेस प्लगइन।
ईमेल अप्ट-इन र सम्पर्क फारम कार्यक्षमता जाँच गर्नुहोस् - गुरुत्वाकर्षण फारम हामीले एक पटक सम्भावित ग्राहकबाट गुनासो प्राप्त गर्यौं कि उनीहरूको भर्खरै शुरू गरिएको साइट फारामहरू थिए तर तिनीहरूले कुनै लीड प्राप्त गरेनन्। जब हामीले साइट जाँच गर्‍यौं, हामीले पत्ता लगायौं कि फारमहरू डमी फारामहरू हुन् र जो कोहीले कम्पनीमा सम्पर्क गरेको हुनसक्छन् पेस गरिएको थियो तर डाटा कहिलै पनि गएको थिएन। पीडादायी! हामी यसलाई सबै ग्राहकको साथ प्रयोग गर्छौं!
गुगल एनालिटिक्स समीक्षा गर्नुहोस् - यो हाम्रा ग्राहकहरूको लागि सधै आश्चर्यजनक हुन्छ कि उनीहरूको पृष्ठहरू केहि वास्तवमा खोजी ईन्जिनले अनुक्रमित गर्छन् वा आगन्तुकहरूले पढेका छन्। हामी विशेष गरी सराहना गर्छौं प्रयोगकर्ता प्रवाह, रिपोर्टले देखाउँदछ कि कसरी व्यक्तिहरू तपाईंको साइटमा नेभिगेट गर्दैछन्।
गुगल खोजी कन्सोल जाँच गर्नुहोस् - एनालिटिक्सले केवल तपाइँलाई देखाउँछ जो वास्तव मा तपाइँको साइट मा आएका थिए। व्यक्तिहरूको बारेमा के जसले तपाईंको साइटलाई खोज इञ्जिनको नतीजामा हेरे? खैर, वेबमास्टरहरू गुगलले कसरी तपाईंको साइटलाई स्वास्थ्य, स्थिरता, र खोज परिणामहरूमा हेर्दछ भनेर हेर्नको लागि उपकरण हो। त्रुटि डाटामा नजर राख्नुहोस् र तिनीहरूलाई पप अप गर्ने क्रममा तिनीहरूलाई सुधार्ने प्रयास गर्नुहोस्।
तपाईंको सामग्री अपडेट गर्नुहोस् - यस पोष्टको लेखनमा, मैले कम्तिमा पनि आधा दर्जन पोष्टहरू अपडेट गरें जुन मैले संदर्भ गर्दै थिएँ कि उनीहरू अप-टु-डेटमा थिए। तपाईंको साइटमा देखा पर्ने मुद्दाहरूमा तपाईं अचम्मित हुनुहुनेछ - जस्तो कि बाह्य साइटहरूको लिंकहरू जुन अब अवस्थित छैन, छविहरू जसमा समस्या हुन सक्छ, र भर्खरको सामग्री पुरानो हो। तपाईंको सामग्री ताजा राख्नुहोस् ताकि यो तपाईंको श्रोताको लागि साझा गरिएको, अनुक्रमित, र मूल्यको हो।
शीर्षक र मेटा विवरण ट्याग समीक्षा गर्नुहोस् - तपाइँको साइटलाई खोज इन्जिनका लागि अनुकूलन गर्ने उत्तम तरिका प्लगइनहरू स्थापना र कन्फिगर गर्नु हो। शिर्षकहरूले तपाईंको पृष्ठलाई यसको खुलासा गरिएको सामग्रीको लागि सही अनुक्रमणिका हुन मद्दत गर्दछ र मेटा विवरणले खोजी ईन्जिन प्रयोगकर्ताहरूलाई तपाईंको सूचीबद्ध परिणाममा क्लिक गर्न प्रलोभनमा पार्दछ।
यहाँ inf० भन्दा बढि सल्लाह र अभ्यासहरूको साथ पूरा इन्फोग्राफिक छ BigrockCoupon!
टैग: 301०१ टूटेका लिंकहरूका लागि पुनःनिर्देशनतपाईंको WordPress डाटाबेस बैकअप गर्नुहोस्तपाईंको पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस्तपाइँको वेबसाइट मा Adsense विज्ञापन जाँच गर्नुहोस्सम्बद्ध लिंक जाँच गर्नुहोस्ईमेल अप्ट-इन र सम्पर्क फारम कार्यक्षमता जाँच गर्नुहोस्टूटेका लिंकहरूका लागि जाँच गर्नुहोस्गुगल कन्सोल (वेबमास्टर) उपकरणहरू जाँच गर्नुहोस्स्रोतहरू प्रयोग गरिएको जाँच गर्नुहोस्साइडबार लिंकहरू र ब्लगरोलहरू जाँच गर्नुहोस्सामाजिक मिडिया लिंकहरू जाँच गर्नुहोस्वेब होस्ट तथ्या .्क जाँच गर्नुहोस्वेबसाइट सुरक्षा जाँच गर्नुहोस्तपाईंको डाउनलोड लिंकहरू जाँच गर्नुहोस्तपाईंको साइट फिड जाँच गर्नुहोस्तपाईंको साइटको नेभिगेसन जाँच गर्नुहोस्रद्दीटोकरी खाली गर्नुहोस्स्वत: बचत मध्यान्तर परिभाषित गर्नुहोस्स्पाम टिप्पणीहरू मेटाउनुहोस्अनावश्यक प्लगइनहरू मेटाउनुहोस्अनावश्यक थिमहरू मेटाउनुहोस्स्वचालित WordPress अपडेट असक्षम गर्नुहोस्डिबग मोड असक्षम गर्नुहोस्ट्र्याकब्याक र पिंगब्याक अक्षम गर्नुहोस्छवि अनुकूलनमेमोरी सीमा बढाउनुहोस्मालवेयर स्क्यानि।मिडिया फाईलहरू सफा गर्नुहोस्डाटाबेस टेबल अनुकूलन गर्नुहोस्रखरखाव पोष्ट गर्दैहेडर ब्यानर र साइट छविहरू ताजा गर्नुहोस्ड्राफ्ट र पोस्ट पुनरीक्षण हटाउनुहोस्निष्क्रिय वेबसाइट प्रशासकहरू हटाउनुहोस्होस्टिंग र डोमेन नवीकरण गर्नुहोस्प्रतिक्रियाहरुलाई जवाफ दिनुहोस्गुगल एनालिटिक्स समीक्षा गर्नुहोस्मेटा शीर्षक र मेटा विवरण ट्याग समीक्षा गर्नुहोस्पृष्ठ- SEO समीक्षा गर्नुहोस्हाम्रो बारेमा तपाइँको पृष्ठ समीक्षा गर्नुहोस्WP चेकअप मार्फत साइट चलाउनुहोस्दैनिक ब्याकअप लिनुहोस्ब्राउजर र उपकरण अनुकूलतातपाईंको फुटरमा प्रतिलिपि अधिकार मिति अपडेट गर्नुहोस्तपाईंको सामग्री अपडेट गर्नुहोस्तपाईंको WordPress प्लगइनहरू अपडेट गर्नुहोस्तपाईंको WordPress थीम अपडेट गर्नुहोस्तपाईंको WordPress विजेट अपडेट गर्नुहोस्पछिल्लो संस्करणमा WordPress अपग्रेड गर्नुहोस्तपाइँको वेबसाइट प्रमाणित गर्दैवेबसाइट सुरक्षा निगरानीवेबसाइट स्पीड अडिटwp चेकअप
एक स्टोरीब्रान्ड निर्माण गर्दै: Pro सम्भावनाहरू तपाइँको व्यवसाय मा निर्भर गर्दछ